मोदीको सुरक्षामा हतियारसहितका ६६ भारतीय सुरक्षाकर्मी परिचालित – BRTNepal
मोदीको सुरक्षामा हतियारसहितका ६६ भारतीय सुरक्षाकर्मी परिचालित
नयाँ पत्रिका २०७५ वैशाख २६ गते १९:५५ मा प्रकाशित
जनकपुरमा हदिश खुद्दार, काठमाडौँमा टेकराज थामी- भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र्र मोदी नेपाल भ्रमण अवधिभर भारतीय सुरक्षा दस्ताकै घेराभित्र रहने भएका छन् । भ्रमणमा ६६ भारतीय सुरक्षाकर्मी परिचालित हुनेछन् । त्यसमध्ये ४१ जना भने नेपाल आइसकेका छन् । २५ जना भने मोदीसँगै आउनेछन् । क्याप्टेनको कमान्डमा भारतीय सेनाको एक प्लाटुन नै मोदीको सुरक्षामा खटिनेछ । गृह मन्त्रालयका अनुसार उनीहरू हतियारसहित रहनेछन् ।
हतियारको लगत राखिने
गृह मन्त्रालयका अनुसार विशिष्ट व्यक्ति भ्रमणका क्रममा उनीहरूसँगै भ्रमणमा रहने सुरक्षाकर्मीका हतियारको लगत भने राखिनेछ । मोदी भ्रमणका क्रममा सुरक्षाकर्मीसँगै भित्रिएका हतियारको पनि लगत राखिएको गृहप्रवक्ता सुवेदीले बताए । उनले भने, ‘विशिष्ट व्यक्ति भ्रमणका क्रममा आउने सुरक्षाकर्मीका हतियारको लागत भने राखिन्छ । त्यसो हुँदा अहिले भएका भारतीय सुरक्षाकर्मी र उनीहरूसँगै भित्रिएका हतियारको पनि लगत राखिएका छन् । यो सामान्य प्रक्रिया हो । नेपालका विशिष्ट व्यक्ति भारत जाँदा पनि उनीहरूले सुरक्षाकर्मी र हतियारको लगत राख्छन् ।’ गृहका अनुसार भारतीय सुरक्षाकर्मी मोदी सुरक्षाको पहिलो घेरामा रहनेछन् । दोस्रो र तेस्रो घेरामा पनि भारतीय सुरक्षाकर्मीकै उपस्थिति रहनेछ । नेपाली सुरक्षाकर्मीको समन्वयमा कमान्ड पनि भारतीयले नै गर्नेछन्।
नेपाली सुरक्षाकर्मीको कमान्ड भने नेपाली सेनाबाट हुनेछ । गृहका अनुसार मोदी भ्रमणमा खटिएका भारतीय सुरक्षाकर्मीको सङ्ख्या अहिलेसम्मकै ठुलो हो । यसअघिका भ्रमणमा भित्री सुरक्षाबाहेक अन्यत्रका लागि छुट्टै सुरक्षा दस्ता खटाउने चलन थिएन । गुप्तचर भने यसअघिका भ्रमणमा पनि पर्याप्त मात्रामा खटिने गरेका थिए ।
सुवेदीका अनुसार सुरक्षा दस्ता बढाउने र घटाउने प्रक्रिया सुरक्षा थ्रेट विश्लेषणका आधारमा तय हुन्छ । उनले भने, ‘सुरक्षाकर्मी कसरी, को, कहाँ र कति खटाउने भन्ने विषय सुरक्षा थ्रेट विश्लेषणकै आधारमा तय हुन्छ । यस पटक त्यस्तै भएको हो कि ?’
‘ज्यामर मेसिन’ भने नेपालकै
भ्रमण अवधिभर टेलिफोन र मोबाइल सिग्नल जाम गर्ने ‘ज्यामर मेसिन’ भने नेपालकै प्रयोग हुने भएको छ । यसले भ्रमण अवधिभर भ्रमण रुटमा पर्ने कम्तीमा सय मिटर क्षेत्रमा टेफिलोन तथा मोबाइल सिग्नल ‘डिम्टिभेट’ गर्नेछ । यसअघिका विशिष्ट व्यक्ति भ्रमणमा यस्ता मेसिन भारतबाटै ल्याउने गरिएको थियो ।
बुलेटप्रुफ गाडी भारतबाटै
नेपाल भ्रमणभर स्थलमार्गमा प्रयोग हुने दुईवटा बम तथा बुलेटप्रुफ गाडी मङ्गलवार नै काठमाडौँ ल्याइएको छ । त्यसमध्ये एउटा काठमाडौँमा प्रयोग हुनेछ भने अर्को जनकपुरमा प्रयोग हुनेछ । विशेष विमानबाट गाडी र हतियारसहितका ४१ भारतीय सुरक्षाकर्मी काठमाडौँ उत्रिएका हुन् ।
केशव अधिकारी, पूर्वडिआइजी नेपाल प्रहरी
२८ र २९ वैशाखमा मोदी नेपाल आउँदै छन् । यसै सन्दर्भलाई लिएर उनको सुरक्षामाथि विविध कोणबाट बहस चलेका छन् । उनको सुरक्षाका लागि नेपाल सरकार गम्भीरताका साथ लागेको देखिन्छ । विशिष्ट व्यक्ति सुरक्षा कार्यविधि ०७० अनुसार नेपाल सरकारले उनको सुरक्षामा सुरक्षाकर्मी परिचालित गर्नेछ । यद्यपि भारतबाट बाक्लै सुरक्षाकर्मी पनि काठमाडौँ उत्रिएका छन् । त्यसो हुँदा विगतमा झैँ यस पटक पनि उनको सुरक्षा खटनपटनमा भारतीय सुरक्षाकर्मी नै हाबी हुने निश्चित छ ।
यस्तो किन हुन्छ ? सोचनीय छ । नेपाली सुरक्षाकर्मी निडर छन् । अब्बल छन् । संसारले स्विकारेको सत्य हो यो । यद्यपि भारतले गर्ने हरेक लडाइँको अग्रमोर्चामा नेपाली सुरक्षाकर्मी नै खटिएका छन् । भारतीय सेनामा झन्डै ४० हजारको सङ्ख्यामा नेपाली आबद्ध छन् । कार्गिल युद्ध होस् या भारत–चाइना बोर्डर लडाइँ । त्यहाँ नेपाली नै युद्धको अग्रमोर्चा लडेका छन् । तर, उनीहरूकै देश नेपाल भ्रमणमा आउँदा भने भारतीय सुरक्षाकर्मी ल्याउनु न्यायोचित देखिँदैन । अब हामीले यो सत्यको पक्षमा बोल्नुपर्छ ।
१८ साउन ०७१ र १० मङ्सिर ०७१ मा मोदी नेपाल आउँदा म नै ट्राफिक प्रहरी महाशाखा प्रमुख थिएँ । भिभिआइपी चढ्ने कारकेड व्यवस्थापन गर्नु मेरो जिम्मा हो । त्यस बेला पनि भारतीय सुरक्षाकर्मीको हस्तक्षेप मैले खेप्नुप-यो । त्यो ठिक होइन । किनकि नेपालले तयार पारेको ‘विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका’ले नेपाल भ्रमण गर्ने कुनै पनि भिभिआइपीको सुरक्षा बन्दोबस्तीलाई सम्बोधन गर्ने ल्याकत राख्छ ।
हुरीबतासले मोदी भ्रमणको तयारी प्रभावित
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जनकपुर भ्रमणको तयारी हुरीबतास र वर्षाका कारण प्रभावित भएको छ । प्रदेश सरकार, जनकपुर उपमहानगरपालिका र स्थानीय सङ्घसंस्थाले जनकपुरलाई सिँगारेका वेला मङ्गलवार राति आएको हुरीबतास र वर्षाले तयारी प्रभावित भएको हो । जनकपुरका विभिन्न स्थानमा बनाइएको स्वागतद्वारा भत्केका छन् ।
झाडु लिएर मेयरसहित सडकमा
जनकपुर उपमहानगरपालिकाका मेयर लालकिशोर साह, उपमेयर रिता झा, सरसफाइ अभियन्ता वैजथान साह, प्याब्सन धनुषाका पूर्वअध्यक्ष महेश मण्डललगायतले जमेको पानी निकालेर सडक सफाइ गरे । ‘हवाहुरी र वर्षा प्राकृतिक हो, यो हाम्रो वशमा छैन,’ मेयर साहले भने, ‘तर, हामी अन्तिम समयसम्म मोदीको भ्रमणलाई भव्य र सभ्य बनाउन प्रयास गर्छौँ ।’ प्रदेश सरकारले बाह्रबिघामा जमेको पानी निकाल्न करिब २२ जना मजदुर खटाएको छ ।
व्यवस्थित बनाइँदै विमानस्थल
मोदी चढेको हेलिकोप्टर जनकपुर विमानस्थलमा अवतरण गरिने भएको छ । विमानस्थलको रङरोगन तथा व्यवस्थित बनाउने काम युद्धस्तरमा भइरहेको छ । विमानस्थलमा दमक, एम्बुलेन्सलगायतको प्रबन्ध गरिएको छ । बुधवार बिहानैदेखि विमानस्थलमा रेडक्रस र जनकपुर अञ्चल अस्पतालको एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा राखिएको छ । जनकपुर उपमहानगरपालिकाको एउटा दमकल पनि तयारी अवस्थामा छ । विमानस्थलका लागि उपयुक्त थप दमकल काठमाडौंस्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट जनकपुरका लागि हिँडिसकेको विमानस्थल प्रमुख मुरारीप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।
७ सयलाई भिआइपी पास
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको जनकपुरको बाह्रबिघामा हुने नागरिक अभिनन्दन तथा सम्बोधन कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रदेश सरकारले ७ सय भिआइपी पास वित्तरण गर्ने भएको छ । भिआइपीहरूका लागि अहिलेदेखि नै प्रदेश सरकारले पासको तयारी गरिरहेको छ । प्रदेशका मन्त्री, प्रदेश २ का राष्ट्रिय सभा सदस्य, प्रतिनिधिसभा सदस्य, प्रदेश सभा सदस्य, पूर्वमन्त्री, संविधानसभा सदस्य, मन्त्रालयका सचिवलगायतलाई प्रदेश सरकारले भिआइपी पासको व्यवस्था गरेको छ । सर्वसाधारणलाई बिहान १० बजेभित्र कार्यक्रमस्थलमा छिर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । उनीहरूलाई पासको व्यवस्था छैन ।
४ कुकुर पनि परिचालन
मोदीले सम्बोधन गर्ने स्थलवरिपरि नेपाल प्रहरीका ४ वटा कुकुर पनि खटाइने भएको छ । विस्फोटका पदार्थलगायत सामग्री जाँचका लागि काठमाडौँबाट ४ वटा कुकुर जनकपुर ल्याइएको हो । बुधवार ल्याइएका कुकुरलाई विभिन्न स्थान जाँचमा परिचालन गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
नेपालका बहादुर सिपाहीमाथि भारतको अविश्वास किन ?
केशव अधिकारी पूर्वडिआइजी
जनकपुरको यात्रा, कर्नाटकको प्रचार !
भारतको दक्षिणी राज्य कर्नाटकको चुनाव प्रचार नरेन्द्र मोदीले नेपालबाट गर्न थालेको टिप्पणी बिबिसी हिन्दी अनलाइनले प्रकाशित गरेको छ । कर्नाटकको चुनाव प्रचारको शून्य समयमा मोदी जनकपुर पुग्दै छन् ।
उनले रामजानकी मन्दिरमा पूजा गरेको दृश्य टेलिभिजनबाट प्रसारित हुनेछ । कर्नाटकका हिन्दु मतदातालाई प्रभावित गर्न मोदीको भारतीय जनता पार्टीले यो योजना बनाएको टिप्पणी बिबिसी हिन्दीका पत्रकार अनिल चमडियाको छ।
उनका अनुसार मोदीले यस्तो उपाय पहिलोपटक निकालेका होइनन् । गत वर्ष ८ मार्चमा उत्तर प्रदेशमा निर्वाचन भइरहेकै दिन मोदीले गुजरातमा सोमनाथ मन्दिरको दर्शन गरेका थिए । जसलाई सञ्चारमाध्यमले महत्त्वका साथ प्रसार गरेका थिए । नयाँ पत्रिका